Brightness Of Your Smile | Way Best inay Guide Ilkaha caddeeya aanu u caddayn
Posts tagged "Nuurkii of dhoolla"
Caddeeya aanu u caddayn Ilkaha Your Iyadoo Kuwani Easy
Haddii aad ku fikiray oo ku saabsan caddeeyo ilkaha laakiin had iyo jeer ahaayeen maalinta Isniinta ah ee ku saabsan habka iyo ahaayeen aadan hubin halka laga bilaabi, aad u baahan tahay in la akhriyo on. Waxaad ka heli doontaa noocyo kala duwan oo soo jeedinaya in this article si ay u caawiyaan in aad fahanto caddeeyo nidaamka ilkaha, awood aad si loo gaaro bast natiijooyinka suurtogalka ah.
Raadi si toos ah xayd cuntooyinka daaweyn caddeeyo ka dib. Ilkahaaguna aad si fudud wasakheeyey doonaa marka ay la caddadeen. Ka dib markii la caddeeyo, isku dayaan in ay ka fogaadaan cuntada iyo cabitaanka waa midab madow ah. Iska ilaali bunka gaar ahaan, sababtoo ah waxaa ka heli kartaa galay lakabka sare ee ilkaha iyo in la yareeyo dhalaalka dhoola.
TALO! Isticmaal saliid qumbaha organic ilkaha dabiiciga ah caddeeyo. Swishing saliid ku wareegsan afkaaga ku dhowaad toban daqiiqo maalin kasta wax ku ool ah u caddayn karin ilkaha.
Liin iyo liin waa il cajiib ah Vitamin C, laakiin waxa ay sidoo kale u caddayn karin ilkaha. Isku day inaad ku xoqeen ayay gudaha ee liin ama orange diirka ah in xoqin on ilkaha si aad u hesho iyaga caddaan. xataa Waxaad ku dari laga yaabaa in yar oo ka mid ah cusbo qolofka ah si kor loogu qaado natiijada la arki karo in habkan soo bandhigi doona.
Isticmaalo baking soda in la cadaydo ilkahaaga. Si aad u caddayn ilkaha si dabiici ah, baking soda shaqeeya yaabab. U hubso in aad cadaydo si tartiib ah marka la isticmaalayo baking soda, waxaa sii xumayn karaan cirridka dadka qaarkood.
TALO! Si aad u samayso a haydarojiin caddeeyo oo macmal ah isticmaalka daawada cadayga iyo baking soda qaso qaybo siman. Isticmaal isku dar si aad ilkaha ilaa toban daqiiqo.
Waxa ugu horeeya ee aad samayso waa si aad u hesho ilkaha cad waa in ay si joogto ah u dhigtaan nadiifinta ilkaha. Hel ilkaha nadiifiyo lix bilood kasta oo aad ballan mustaqbalka halka xafiiska nadiifinta aad hadda.
Cabidda cabitaanno fara badan oo biyo ah waa farsamo weyn si ay uga caawiyaan ilkaha sii cad. Cabitaanka biyaha ku filan afkaaga biyo raaci doonaa, ka hortagga Wasaqda ka dhisa on ilkaha. Waa dhaqanka wanaagsan inay biyo ka cabbaan, gaar ahaan inta lagu jiro iyo ka dib cuntada.
TALO! Ma doonaysaa ilkaha si loo eego caddaan? Cun tufaax. Tufaax yihiin kuwo aad u sugi lahaayeen oo ay si deg deg ah ilkaha nadiifiyo doonaa iyadoon dhibaato kasta oo waxyeello ku dhaldhalaalka ah ee ilkaha.
Cun cuntooyin caafimaad leh; cuntada cayriin sida midhaha ama khudaarta haddii aad rabto inaad aragto ilkaha caddaan. Isku day in aad ka fogaato cuntooyinka sida marka kasta oo suurta gal si ay u caawiyaan ilkaha sii caafimaad. Sidoo kale waa inaad ka fogaato cuna aad u badan haddii aad rabto in aad dhoola dhalaalaya.
Isticmaal dhuun ama tuubo marka aad la cabo wax cabitaanno madow. caws engegan A whitens ilkaha by yaraaneyso xaddiga waqtiga ay qaadanayso aad sharaabka inuu jebiyo ilkaha. By la dhaldhalaalka socda si toos ah hoos dhuunta oo xiriir yar, waxaa jira xayd yar oo midab.
TALO! Ka dib marka aad mari ilkaha ah caddeeyo nidaamka, waxaa muhiim ah in aad cabto cabitaanno cad oo keliya ugu yaraan saddex ilaa afar maalmood. In maalmahan hore, dhammaan noocyada kala duwan ee midabada Midho si sharaabka gudcur aad u nuugo karaa ilkahaaga.
Haddii ay jiraan taaj afkaaga, ilkaha u caddayn laga yaabaa in; Si kastaba ha ahaatee, taajaj aad sii joogi doonaa midab isku mid ah.
Haddii xawaaraha iyo waxtarka yihiin ahmiyadaha ugu ilko-caddeeyo, naftaada u hesho si aad ilkaha ugu dhaqso badan. Waxaa jira faa'iidooyin badan oo ilko caddeeyo siin kara idiin, inkastoo ay sidoo kale yeelan karaan cawaaqib xun iyo weliba. Waa xigmad leh inay la tasho dhakhtarkaaga ilkaha ka hor inta aadan isku deyin in ay u caddayn ilkaha, si loo hubiyo in ay yihiin kuwo caafimaad qaba, iyo Wasaqda ee aan la keena dhibaatooyin dahsoon. Play u nabdoon; qotomiyey qorshe caafimaad oo waxtar u leh caddeeyo ilkaha iyadoo la kaashanayo dhakhtarka ilkaha ee.
TALO! Haddii aad sigaar cabto, aad qalab ugu awooda badan for caddeeyo ilkahaaga waxaa ay kor u siinayo caado ka. Waa wax aan micno lahayn in ay lacag on ilkaha la caddeeyo waxyaabaha qaataan haddii aad sii sigaarka.
Caday ilkaha ka dib kasta oo hadhuudh caawin doonaa si ay u sii ka Wasaqda. Tani waxay xaqiiqdii waa run marka ay timaado kafeega.
Caday aad ilkaha caawisaa ilaaliso. Qaado daawada ilkaha wanaagsan, mid ku dagaalama godadka iyo waxay ka caawisaa ilkaha caddeeya. Waxaa jira noocyo kala duwan, si iyaga cilmi kaa caawin kara inaad mid u shaqeeya ilkaha ka heli.
TALO! Haddii aad ku talo qaadan biraha silig mustaqbalka dhow, mid ka mid ah talo waa in aad caddayn ilkaha ka hor inta hawshu bilaabato. Haddii aad qaadato talo this, ilaa aad ku dhamaan doonaa ilkaha in ay yihiin oo keliya ma aha straighter, laakiin caddaan iyo sidoo.
biyo la cabo inta badan kaa caawin doonaa ilkaha caddaan. Mayrin ilkaha biyo sidoo kale iska maydh karaa qayb keeni kara midab ilig. waxaa Caado ka dhigo inay biyo ka cabbaan cuntada aad cunto iyo inta lagu jiro.
Jooji isticmaalaya dawo luqluqasho. Goynta dawo luqluqasho ka mid ah noloshaada laga yaabaa in loo xaliyo arrimaha aad la dayactirka ilkaha cad. Dawo luqluqasho ka kooban yahay kiimikooyin badan waxyeello. Qaar ka mid ah kiimikooyinka, kuwaas oo u yeeli karaan iyo discolor ilkaha.
TALO! Hal hab si ay u caawiyaan ilkaha sii cad waa in aan cabbo cabitaan badan jilicsan. cabitaannada fudud ku jira midabaynta in discolors iyo ilkaha Wasaqda.
Cunista cheese cuntada ka dib caawin kara content macdanta ee ilkaha ah. Cilmibaaris ayaa muujisay in calcium siinayaa ilkaha dhaldhalaalka fursad u dhiska.
An ilkaha u fiican tip caddeeyo waa in la isticmaalo walnut geed jilif. Dalbashada noocan ah jilif ilkaha u soo saartaa saamayn caddeeyo weyn, iyo waxa ay sidoo kale bixisaa nadiifinta qoto dheer. Waa in aad raaci baxay afkaaga iyo si fiican cadaydo ilkahaaga ka dib markii la isticmaalayo jilif.
TALO! baking soda loo isticmaali karaa sida cadayga ah si tartiib ah hadal haynta in sidoo kale whitens ilkahaaga marka la haydarojiin isku qasan. Caday ilkaha adiga oo isticmaalaya walaaqdey ilkaha dhalaal aan ku kiimikada waxyeello.
Cunista cuntada la yiddidiilo a noqon karaa mid aad wax ku ool ah. Foods, sida ulaha karooto iyo tufaax, caawiyo si aad ilkaha caddaan. Foods in ay yihiin callaaliska nadiifin kartaa ilkaha inta aad calalin. Is ogow si aan u baabbi'iyo in ay xaalad dhan, halkii ay tuban ama iyaga dicing.
TALO! Cun cuntooyin caanaha more. Waxyaabaha sida cheese, caano iyo yogurt leeyihiin nafaqooyin iyaga in in ay gacan xoog leh, ilko caafimaad-raadinta.
Waa in aad ogaato in nidaamka la caddeeyo kasta oo keliya ka shaqeeya on ilkaha dabiiciga ah. Haddii aad qabto shaqada ilkaha sida biraha, biraha, taaj ama buuxinta ee hore ee afkaaga, iyagu ma beddeli doonaa midab. Caddeeyo ilkaha dabiiciga ah waxay keeni kartaa shaqo ilkaha laalaadin sida suulka xanuun.
Isku day iyo harooyinka ayaa isku dar ah si ay u caddayn ilkaha. Isku qas qeybtii cusbo qaado dhagax la hal koob biyo ah oo halkaas ku fadhiisan muddo shan daqiiqo. Ku luqluqo biyo ku cusbayn, halkii luqluqasho. Farsamada Tani waxay kaa caawin kartaa in la yareeyo bakteeriyada in la xadido tirada godadka afkaaga.
TALO! miraha kala duwan ay kuu siiyaan hab ammaan ah oo wax ku ool ah in ay si dabiici ah ka dhigi ilkaha caddaan. Tusaale ahaan, strawberries noqon karaa mid aad wax ku ool ah.
Marka baakidh aadan si fiican u haboon, kiimikada ah si fudud u saamayn kartaa deegaanka cirridka oo keeni cuncun ama caabuq.
Waxaa jira siyaabo ammaan ah iyo si sahlan badan oo ay ku caddeeya aanu u caddayn iyo iftiimin ilkaha in aadan lacag maal a. Habka A weyn waa in lagu fuliyo isticmaalka baking soda. Waxaa jira cadeyga ay ku jiraan baking soda oo aad ka iibsan kartaa, ama isticmaasho alaabta ee armaajada guriga.
TALO! Ha ka qayb qaataan sigaarka waaweyn ama sigaarka. Waxay sababi doonaa midab ilig.
Iyadoo cadeyga caddeeyo maqan xoogga hababka kale ee la caddeeyo, waxay ka hortagi kara ama laga takhaluso Wasaqda cusub. cadeyga waxay isticmaalaan hadal haynta silica in wax ma yeeli doonto dhaldhalaalka ah.
Isku day inaad la isticmaalayo cusbo qaar ka mid ah marka aad cadaydo ilkahaaga. fudud A, weli trick wax ku ool ah in la caddeeyo ilkahaaga waxaa cadayashada cusbo. Waa inaad afkaaga biyo raaci si fiican ka dib cadayashada kasta. Sababtoo ah waa hadal haynta, ha is kaxaystay la cadayashada cusbo.
TALO! Ka dib markii cuntada, xanjo caddeeyo sida Orbit si aad u ilaaliso dhoola. Qaar ka mid ah xanjo dejiya si aad u caddayn ilkaha.
Waa in aad cadaydo, iyo sidoo kale codsan massage xanjo ah. Habka ugu fiican si loo hubiyo in aad dhoola joogo cad waa in ay si fudud u cadaydo iyo xadhigga ka dib cunista. Tani waxay u ogolaaneysaa in aad in laga takhaluso ka hadhay cuntada iyo huurada ka hor inta aysan dhisi oo waxaan ka dhigi wax dhaawac ah.
diirka muuska A waxaa loo isticmaali karaa marka aad cadaydo ilkahaaga. Tani waa hab fudud in dadka intooda badan ku dhaaran shuqullada. Xoq badan ilkaha la diirka muuska hortooda ku cadayashada. Markaas aad ilkaha cadaydo si la mid ah in aad had iyo jeer la sameeyo. Waxaad arki doontaa wax natiijo degdeg ah ee ilkaha.
ilkaha Yellow waa calaamad si fudud dareemi qof in qof sigaar cabba. Waxay noqon kartaa adag si ay u sii cad dhalaalaysa marka aad sigaarka cabto. Haddii ay noqoto in aad sigaar cabtid, isku day in aad wax yar ka yar sigaar si aad uu noqon karaa mid caafimaad oo wanaagsan raadinaya ilkaha.
Caddeeyo ilkahaaga waa hab fiican oo macno ahaan ka wanaagsan tayada noloshaada. ilkaha caddaan doonaa ma aha oo kaliya ka dhigaysa in aad wax intaas ka sii jiidasho leh; waxay kaa caawinaysaa in aad u noqon kalsooni badan ee bulshada. Waxaad ka heli doontaa in aad tahay dheeraad ah oo diyaar u ah inay ka baxaan oo wax dad kale sameeyo. Codso taladan si loo kordhiyo natiijada, iyo si degdeg ah oo afforadably u gaadhi.
Posted by Guide Ilkaha caddeeya aanu u caddayn - June 5, 2016 at 12:32 AM
Categories: Home ku saleysan in Ilkaha caddeeya aanu u caddayn Tags: dhoola quruxda, Nuurkii of dhoolla, caddeeya aanu u caddayn ilkaha, Caddeeya aanu u caddayn Ilkaha Your Easy, caddeeyo ilkaha